အွန်လိုင်းမှာ ငွေရှာနည်း - စိုင်းနက်ရှိုင်း မှတ်စုစာအုပ်
Autorun.Virus.Remover & Knowledge
Eset NOD32 Anti Virus Update Offline
ESET Offline Update (update 5233-20100628)
Kaspersky 2011 Crack for 3700 days (update.! 22.01.2011)
တစ်သက်လုံး သုံးလို့ရမယ့် ESET Smart Security နဲ့ NOD32 Antivirus 4
" Factory 2.20 "
"format Factory 2.20 "
AXPDF PDF To Flash Converter 2.36
AXPDF PDF To Image Converter 2.11
Aleo Flash Intro and Banner Maker v3.2 Portable.rar
Flash သီးချင်းတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ SWISHmax တဲ့ဗျ
Guitar Pro5and 6
hotfile, rapidshare, megaupload, download.speedbit, 4shared နှင့်အခြားသော hosting ဆိုက်တွေက ဖိုင်တွေကို စောင့်စရာမလိုဘဲ ဘယ်လို Download လုပ်ကြမလဲ
Megaupload, Megashares, Netload, Hotfile, Easy-Share, Uploading, Megavideo ဆိုက်က Download link တွေကို premium account မလိုပဲနဲ့ Download လုပ်ကြစို့
MP-3 Cut လုပ်နည်း
pdf to excel other format converter
Pixarra Pro 16.18 2
Portable Aleo Flash Intro and Banner Maker v2.6.106.rar
software သုံးပြီး folder နောက်ခံပြောင်းနည်း
USB ကိုအလွယ်တကူ remover လုပ်နိုင်ရန်
Your unstaller software လေး
သင့်ရဲ့ USB drive, Memory stick, Thumb drive, MP3/MP4 player ထဲမှဖိုင်များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ တခြားမဆိုင်သူ မဖတ်စေချင်ရင်.....
autocad 2005 မြန်မာလိုစာအုပ်
Basic HTML မြန်မာလိ်ုစာအုပ်
CRACKER လမ်းညွှန် (မြန်မာလိုစာအုပ်)
Gmail အသုံးပြုနည်းလျှိုဝှက်ချက်များ (မြန်မာလိုစာအုပ်)
Hacking အတွက်လေ့လာရန် စာအုပ်များ
Learning CSS မြန်မာလိုစာအုပ်
NET WORK စာအုပ် (မြန်မာလို)
video တည်းဖြတ်ရေးအတွက် Ulead Video Studio6(မြန်မာလို)
WINDOW7တင်နည်းမြန်မာလိုစာအုပ်
ကက်စပါစကီး Offline Update လုပ်နည်း
Aleo Flash MP3 Player Builder (MP3 to SWF Converter)
CreatingaNew Document (flash)
FLV & SWF Tool box (Portable)
my created flash songs
Myanmar Flashsong Part (2)
total video converter ဒေါင်းရန်နှင့် mp3 ခြုံ့နည်း converter အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများ
ကွန်ပြူတာကို စကားပြောခိုင်းပီး ကောင်မလေး ဆီက အချစ်ကိုရအောင် ယူမယ်
Flashs Download ဒေါင်းရန် Flash ဂိမ်း များ
Game များအား အပြည့်အ၀ဆော့နိုင်ရန်
mp4 နှင့် ဖုန်းများအတွက်nes files များ
mp4 နှင့် ဖုန်းများအတွက်nes files များ (2)
Professional Flash Game Development
Professional Flash Game Development (2)
gtalk & gmail
Gmail Account Locked ကျသွားရင် ဖြေရှင်းနည်း
Gmail Fack Login
Gmail တွင် ပို့ပြီးသား Mail ကို ပြန်ဖျက်ချင်ရင်
Gtalk bot လုပ်နည်းကို mmgeeks အဖွဲ့က en2mm dictionary
ကိုချာတိတ် G-Talk မှာ ico ထည့်နည်း
ကျနော်တို့ mail အတုလေးလုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို စ ရအောင်ဗျာ...
လွယ်ကူစွာ Gtalk G mail သုံးနည်းစာအုပ်
အကောင့် disable ဖြစ်သွားလျှင်
110 Mb ကိုအသုံးပြု့ ပြီး password များခိုးခြင်း
5 minute hacking (fake login page)
5 သိန်းတန် CDMA 800 Mz က prepaid card အကြောင်း
Account တွေကို ဖွင့်လို့မရအောင်...
administrator password ကိုပာက်နည်းပါ။
AIO Hacking Tools
Cafezee ကို Hack ချင်ရင်
DDoS v 5.5 Final (Website hackinG TooL)
Firefox ၏ Screen နောက်ကွယ်မှ လျှို့ ၀ှက်ချက်များ
folder lock (or) ဖောက်ဖျက်ခြင်း
G Mail Hacking 2006 (E-Book)
G-talk password ကိုခိုးနိုင်တဲ့ အကြောင်းလေး
Gmail , Yahoo Mail ထဲမှာ IP address ရှာပုံတော်
Gmail Fack Login (1)
gmail ပာက်နည်းနှင့်။မိမိpassword မပါအောင်လုပ်နည်း။
hack မယ်လို့ပြောပြီးတော့ .........
Hacker's Browser v 2.0
How to hack gmail password (ဂျီမေးလ် password ကို ဘယ်လို hack မလဲ)
Java Drive By Tutorial : How to hack via Website
Registry Hacking များ (၃)
See Password နဲ့ အဆင်မပြေသူများ စမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်
USB thief 5.4
wireless password ကိုကြည်နည်း
ဖျတ်မိသွားတာတွေကို အလွယ်တကူ Recovery ယူမယ်
ပောာဒီလို ပောာဒီလို (နောက်နည်း)
ပြည့်စုံသော HACKING Information
မြန်မာ G-Mail page အတု
Dreamwaver CS4 နဲ့ အခြေခံ website ပြုလုပ်နည်းသင်ခန်းစာ (2)
Dreamwaver CS4 နဲ့ အခြေခံ Website ပြုလုပ်နည်း (သင်ခန်းစာ - ၁)
Dreamweaver CS4 Light )portable
html မိတ်ဆက်သင်ခန်းစာ ( ဘလော့ရေးသောသူငယ်ချင်းတိုင်းအတွက်)
Mobile secrect code
mobile များအတွက် application များ
Nokia C7 မှာ မြန်မာဖောင့်နဲ့ မြန်မာလိုပေါ်အောင်လုပ်နည်း
Nokia ph မှာ Best Black List အသုံးပြုနည်း
Nokia နဲ့ Sony Ericsson ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာလို SMS ပို့တဲ့ application လေးပါ
Ornagai Mobile Dictionary Version 2
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Mobile Phone Software Download Websites
မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် အသုံးဝင်သော ဆောစ်ဝဲလ်(Black list ဆောစ်ဝဲလ် )
မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း အတွက် မလေးရှား ဆော့ဝဲ
မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ၂၀၁၀
မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ၂၀၁၁
မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း .jar နှင့် .sis
၃ ရက်ပဲခံတဲ့ မြန်မာ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း ဆော့ဝဲ အတွက်
notepad လေးနဲ့ ကလိကြည့်မယ် အပိုင်း၃
Notepad လေးသုံးပြီး ကလိကြည့်ရအောင်........
Acdsee Pro v3.0 + keys
Picget Magic Photo Editor_5.6
Ulead Photoimpact X3 Full + Addons
Wedding Album Maker Gold 3.10 Portable ( 25.44 MB)
portable soft wares
Portable PIMOne Software DiaryOne v6.8
Portable ကြိုက်သူများအတွက် Portable Softwares ၁၆၅ ခု
SWiSH MaX.4 Portable
54. Folder color ချိန်းကြရအောင်
Oxford Business English Dictionary !!!
pdf ဖိုင်တွေပြောင်းတဲ့ ဆောဝဲလ်......
ကိုယ့်ရဲ့ Memory Stick ကိုPasswordပေးချင်သူများအတွက် USB Safeguard
သိပ်မိုက်တဲ့ Software ကိုယ်ကသ်ီချင်းဆိုရင်နောက်ကလိုက်တီးပေးမယ်
အကောင်းဆုံးTranslator systran premium6serial and crack Full
C++ ကိုအသုံးပြုပြီး Antivirus code ရေးသားခြင်း
computer startup လုပ်တိုင်း restart ဖြစ်စေတဲ့ Virus
Trojan Horse တစ်ခုဖန်တီးလိုလျှင်
USB ports ကို Disable လုပ်နိုင်တဲ့ Simple Virus
Virus making Tool များ
Virus ဆိုတာ ဂျိုနဲ့ လား (Virus 12ကိုမြင်ဖူးချင်ရင်)
Virus ပုံစံ နောက်တမျိုး
Virus ဖန်တီးခြင်း (၁)
Virus ဖန်တီးခြင်း (၃)
Websites ကို Block လုပ်တဲ့ Virus
စတင်လေ့လာသူများအတွက် C++ Virus Guide
စတင်လေ့လာသူများအတွက် C++ Virus Guide (၂)
အလွယ်ဆုံး virus ရေးချင်ရင်
၂၄နာရီ အတွင်း Top 10 Virus များ
website & blogs များအတွက်
ဗီဒီယို တွေနဲ့ swf flash ဖိုင်တွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုရင်-
ဘလော့(ဂ်) ပို့စ်တွေမှာ နောက်ခံပုံလေးတွေ ထည့်ရအောင်
မှတ်ထားမိသော Website များ
ငါ .... လွမ်းတယ်
Data တွေ Recovery ဘယ်လိုလုပ်မလည်း
Rapidshare ကနေ 1 Sec အတွင်း Down မယ်
ကိုဖန်တီးထားတဲ့ Cd ခွေတွေသူများတွေထပ်မကူးစေချင်ရင်
ဒီတခါတော့ ဘာ software မှမသုံးပဲ crack...,keygen...,serial ....တွေကို ဒီနည်းလေးသုံးပြီးရှာကြည့်ရအောင်
မှားယွင်းဖျတ်ဆီးလိုက်သည့် Data များအတွက် ICare Data Recovery Software
PASSWORD အခိုးခံ ရမှုများ လာခြင်းကြောင့် အထူး သတိပြု အသုံးပြုရန် လိုအပ်လာ
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီး ဘာလဲ... ဘယ်လဲ?
၃ မိနစ်ပဲစောင့် ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ချက်ခြင်းဖန်တီးလို့ရပြီ ..
ချစ်သူ ရည်းစား မပြောသင့်သော စကားများ
အသည်းကွဲနေ သူများ အများအပြားရှိပါသည်
အရှင်ဝိသုတ - ရေနီ
ငါသည်သာ ငါ့ပြိုင်ဘက် - ဂျောက်ဂျက်
တိမ်တွေနေတဲ့အရပ် - ချစ်သုဝေ
ဘဝရဲ့နိဗ္ဗာန် - J Me
ဘဝသစ်ရဲ့မာတိကာ - Reason ( အောင်လ )
မင်းအတွက် - ၃ ( ဟစ်ဟော့ )
မင်းအတွက် - ၃ ( ပေါ့ပ် )
လိုက်ခဲ့တော့ (Live Show) - ကေကေတီ
အဆိပ်တက် အိမ်မက် - Rဇာနည်
မွေးနေ့ - 9' Night - 2
(SWF ကာတွန်းဟာသ link များ)
gtalk အတွက်စာသား အလန်းလေးတွေ
Mr.Bean သာ ........ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကလေးတွေ ကပြောပြမယ့် ဟာသ
ခါးပါ ရင် အားနာ တက်တယ် ဗျ
အများစုသောအပျိုကြီးလူပျိုကြီး တို့၏ စရိုက်လက္ခဏာများ
2011 စံ-ဇာဏီဘို ၂၀၁၁ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
ဗဟုသုတများ‎ > ‎
ဒီနေ့ခောတ် စီးပွားရေး အခြေအနေအရ Gas ၊ စားသောက်ကုန် ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ မိုးထိအောင်တက်နေတော့ လူတွေရဲ့ဝင်ငွေ
ဟာ ကုန်ဈေးနှုန်းကို လိုက်လို့မမီဘူးဆိုတာ သိရှိလာကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လူအများစုဟာ ငွေကို အလျင်အမြန်ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်
အင်တာနက်စီသို့ ခြေဦးလှည့်လာကြတာ မဆန်းပါဘူး ။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သုံးစွဲခ ဘီလ် ( bill ) ကို ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ ဆိုတာနဲ့
ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်နေကြပါတယ် ။ တခါတလေမှာလည်း ဘီလ်တောင်းခံမှုက အရမ်းများနေတတ်ပါတယ် ။
အခုဖော်ပြမှာကတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အလွယ်တကူ အင်တာနက်မှာ ငွေရှာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ။ သင်ဟာ ချမ်းသာသွားမှာလား? အဲလိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး ။ ဒါပေမယ့် တစ်လမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ ၊ ၃၀၀ ကျော်လောက်တော့ ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ Ebay အကြောင်း မပြောလို့တော့ မဖြစ်ဘူး ။ ငွေကို ချက်ချင်းရှာဖွေနေချင်သူအတွက်တော့ Ebay ဟာ သိပ်တော့မကောင်းဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူက လူတွေအားလုံးကို အိမ်မှာနေပြီး ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အွန်လိုင်း (online) မှာ ရောင်းခွင့်ပေးထားလို့ပါ ။
eBay မှာ ဈေးရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ရောင်းဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုခု ရှာရမှာပေါ့ ။
သင်ဟာ ဒီကနေပြီး eBay မှာ Register လုပ်လို့မရပါဘူး ။ Country or Region Box မှာ My နဲ့ စတဲ့ နိုင်ငံမပါဘူး ။
သင်ဟာ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ Hong Kong, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam တို့ရဲ့ Address,
City, State, Zip Code, Telephone Number တို့ဖြင့် Register လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
eBay မှ ၀င်ငွေရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သင်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ရောင်းချမလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ရှင်းပြထားသော Ebay For Dummies Starter Kit လို့ခေါ်တဲ့ ebook စာအုပ်တွေကို ၀ယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
Freelancer ဆိုတာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ့်ဘာသာလုပ်သူ ၊ မည်သည့် အလုပ်ရှင်နဲ့ ရေရှည် စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားခြင်း မရှိသူ လို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ။
သင်ဟာ အင်တာနက်မှာ freelance writer စာရေးဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ် ။ Businesses စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ၊ Internet Marketers အင်တာနက်မှာ အရောင်းမြှင့်တင်တဲ့သူတွေ ၊ about.com လို website တွေဟာ freelance writers တွေကို အသုံးပြုပါတယ် ။ ကံကောင်းတာက သင်ဟာ ကျွမ်းကျင်သော စာရေးဆရာ ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး ။
သင်ဟာ freelance writer အဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် websites များအတွက် Blog post, Articles ဆောင်းပါးများကို ရေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သင်ဟာ fiction စိတ်ကူးယဉ်စာပေသော်လည်းကောင်း ၊ non-fiction အမှန်တရားတွေ၊ လူအကျင့်စရိုက်တွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ အကြောင်းသော် လည်းကောင်း ရေးသားဖို့ အခွင့်အရေး ရနိုင်ပါတယ် ။
သင်ဟာ တစ်နေ့ကို ဆောင်းပါးအနည်းငယ်ရေးပြီး ငွေကို ရယူပါ ။ ဒီ အခွင့်အရေးကို http://www.reviewopedia.com/freelancehomewriters.com.htm မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
note : သင်ဟာ freelance photographer, freelance graphic designer အဖြစ်လည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ် ။
Company များမှာ ဖတ်ဖို့လိုအပ်သော emails တွေ တစ်နေ့မှာ ထောင်နဲ့ချီပြီး ၀င်နေပါတယ် ။ CEO (သို့) အလုပ်ရှင်ဟာ နေ့တိုင်း
email ဖတ်ဖို့ အချိန် မဖြုန်းနိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် email ဖတ်ပေးဖို့ လူငှားတယ်ပေါ့ ။
email ဖတ်ပေးခကိုတော့ အလုပ်ရှင်နဲ့ ညှိနှိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လက်မှုပစ္စည်းတွေလုပ်တတ်ပါသလား? www.etsy.com မှာ လက်မှု ပစ္စည်းတွေ ( handmade craft or product ) အရောင်း အ၀ယ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ။ ရောင်းချသူများဟာ eBay ထက်ပိုပြီး အကျိုးအမြတ် ရကြပါတယ် ။ သင်ဟာ ဒီလိုမျိုး ပြုလုပ်နိုင်သူ ဆိုရင်တော့
ငွေတွေ ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ ။
သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် website ရှိစရာ မလိုပါဘူး ။ Blogging software များကိုလည်း install လုပ်စရာမလိုပါဘူး ၊ ကြော်ငြာများကို ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ ဆိုတာကို လည်းသိဖို့မလိုပါဘူး ။ Blogger.com မှာ web design ကို ဘာမှနားမလည်လဲ blog တစ်ခုကို အခမဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ် ။ Blogger ဟာ Google AdSense နဲ့ ဆက်သွယ်ထားပြီး သင်ဟာ သင့်ရဲ့ blog မှာ ကြော်ငြာ ads တွေကို ဖော်ပြခြင်း ၊ လူတွေဟာ အဲဒိ ads ကြော်ငြာ တွေကို click နှိပ့်ခြင်း ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ သင်ဟာ ၀င်ငွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒိထက် ၀င်ငွေပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ affiliate program တွေကို အသုံးပြုပါ ။ Monetizing your blog နဲ့ ပတ်သက်ပြီး http://weblogs.about.com/od/?once=true& ဒီ link မှာ ဆက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။ သင်ရဲ့ blog ကို လူတွေ အများကြီး ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများကို ရေးပါ ၊ အရေးအသားကောင်းပါစေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြပါ ၊ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် ။